Sameey sidaan si aad dhakhso u seexato | Radio Himilo
Home / Daraasad / Sameey sidaan si aad dhakhso u seexato
Muqdisho – Badanaa maskaxda waxa si lama filaan ah ugu soo dhaca xilliga u diyaar garawga hurdada hawlihii ugu weynaa. Waxay ka fekertaa waxyaabihii aan u qabsoomin iyo kuwa horyaala maalinta xigta.
Si loola dagaallamo dhibaatadan, daraasad cusub ayaa soo jeedisay fure uu ku jiifsado ruuxa dhowr daqiiqo gudahood.
Inkasta oo ay daraasado tira badan horey u sharraxeen xalka lagula dagaalamo hurda la’aanta sida tababarka neefsashada, ku qabeysiga biyo diirran iyo qaboojinta qolka hurdada, ayaa haddane cilmi baaristaan cusub oo laga sameeyay mareykanka waxay dabool qaadeysaa in qorista liiska hawlaha berrito ay kaa kaabi karto 15 daqiiqo guduhood in aad hurudo adigoon qaadan maandooriye ama caleen caafimaad.
Hoggaamiyaha daraasaddan, Dr. Michael Sculin, ayaa gebo-gebada baaristaan kaddib waxa u caddaatay in 57 ka mid ah ka qeyb galayaashii oo qorta liiska hawlihii ay qorsheyeen ku seexdeen 15 daqiiqo gudahood marka la bar-bardhigo kooxda labaad oo qoratay liiska hawlihii u hirgalay inta uusan seexan maalintaas.
Daily Mail ayaa sidaas sheegtay in kormeeraha cilmi baaristaan uu sharraxay qorista hawlaha berrito ku horyaala kaa caawinayaan iney la dagaalamaan welwelka, baq-dinta iyo fekradaha xun ee shaqada maalinta xigta, islamarkaana dhammaantood kaa kaabayaan xasilka maskaxda.
Previous: Rea Madrid oo Ronaldo u adeeg-saneysa soo xera-galinta Neymar
Next: Baxnaano lix bilood qaadatay oo badbaadisay!